မကြာသေးခင်က၊ ( Munich ၏ အောက်တိုဘာ ၂၅-၂၈ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံ ) အတွက် Switzerland ၌ပြုလုပ်သော အကြိုတွေ့ဆုံပွဲတွင် အမျိုးစုံသော သတင်း များနှင့် နည်းပညာ များကြားတွင် သမိုင်းမှာ တောင်မဖြစ်ခဲ့ဖူးသော အထီးကျန်ဆန်လူငယ်များအတွက် အထူးကိုယ်စားပြုဆုတောင်း ပေးခဲ့ကြသည်။
ဆုတောင်းစဉ်တွင် စိတ်ထဲ၌ကျမ်းဗုဒ် နှစ်ခုပေါ်လာသည်မှာ၊ ၂ တိမောသေ ၃း၁-၅၊
နောင်ကာလတွင်လူတို့သည် ကိုယ်ကိုကိုချစ်တတ်သောသူ၊ ငွေကိုတပ်မက်သောသူ၊၀ါကြွားသောသူ၊ ထောင်လွှားသောသူ၊ သူအသရေကိုဖြတ်သောသူ …. စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဒီကျမ်းပုဒ်ကိုဖတ်တိုင်းတွင် ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင် ရှင်ပေါလုကို “သင့်ခေတ်အခါတုန်းက လူတွေဟာ ကောင်းကင်းသာမန်တွေနဲ့တူပြီး၊ မကောင်းတာတွေကို မလုပ်တတ်ကြတဲ့လူတွေလား?” လို့မေးချင်ပါသည်။ ဒီကျမ်းပုဒ်က အနာဂတ်အတွက်ပဲလား? မဟုတ်ပါဘူး၊ သို့သော်လည်း ရှင်ပေါလုခေတ်လူတွေသည် ဂျူးဖြစ်စေ၊ ဂရိတ်လူဖြစ်စေ သူတို့မှာ အကောင်းမူတွေ ရှိနေသော်ငှားလည်း သူတို့အတွင်းစိတ်သည် မှန်ကန်လေ့ရှိသည်!
ပရောဖက် သတိပေး စကားသည်၊ ဒီလို အကျင့်ဆိုးများ လောဘ၊ ပုံကန်ခြင်း၊ ငွေကိုချစ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်း၊ လိင်တူလက်ထပ်ခြင်း တို့ကို ပုံမှန်ပါဟု လူတွေလက်ခံသည့် အချိန်ကာလသည် ရောက်လာလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပြီး ဒီလိုဆို တာတွေက ဘယ်လိုမှားတာလဲ?
ကျွန်တော်တို့သည် ထိုကာလာတွင် အသက်ရှင်သူများဖြစ်သည်။ အားလုံးထဲမှ မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်း နှင့် ငွေကိုချစ်ခြင်းတို့သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ဖြစ်လာသည်။ လိင်တူ လက်ထပ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်း နှင့် ကိုယ့်ကို အသက်မွေးပေးသည့် မိဘများကို နာမခံခြင်းထက် တစ်ခြားမရှိတော့ပေ။ မိသားစု များအားဖြင့် ဘုရားသခင်အလိုတော် အတိုင်းဘုန်းတော် ထင်ရှားစေရန်ဖြစ်သည်။
ကြည့်ရူလော့၊ ထာဝရဘုရား၏ ကြောက်မက်ဘွယ်သော နေ့ရက်ကြီးမရောက်မှီ၊ ပရောဖက် ဧလိယကို သင်တို့ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်မည်။ ငါသည်လာ၍ သင်တို့၏ပြည်ကို ကျိန်ခြင်းဘေးနှင့် ဒဏ်မခတ်မည် အကြောင်း၊ ထိုပရောဖက်သည်သားတို့နှင့် အဘတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အဘတို့နှင့်သားတို့ကိုလည်းကောင်း အသင့်အတင့် ဖြစ်စေမည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ (မာလခိ ၄း ၅-၆)။
ဒီကျမ်းဗုဒ်နှစ်ခုကို ၀ိညာဉ်တော်က နှလုံးတွင် ဖွင့်ပြပေးပါသည်၊ ၂ တိမောသေ ၏ ကတိတော်သည် နားလည်မူ နှင့် နားလည်ရန်ဖြစ်သည်၊ မိသားစု၌ သားသမီး နှင့် မိဘကြား ရိုးသားခြင်း တို့အတွက် ဘုရားနေ့ရက် မတိုင်မှီ ဧလိယ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးသော ခေတ်ကာလ၏ လကဏ္ခာ များသည် မိမိကိုယ်ကိုကိုသာချစ်တတ်သော သားသမီး နှင့် မိမိဆန္ဒကိုသာ ဦးစားပေးတတ်သော မိဘများကြားတွင် ကြီးမားသော ပြသာနာဖြစ်လာသည်။
ထို့ကြောင့် ဧလိယ ပရောဖက်ပြုသည့်အတိုင်း ယေရူခရစ် ပြန်ကြွမလာမည် ၀ိညာဉ်တော် ကြီးမားစွာ သွင်းလောင်းမည့်အကြောင်း နှင့် မိသားစုများပြန်လည်သင့်မြတ်လာမည့်အကြောင်းတို့ပြည့်စုံလာဖို့ဖြစ်သည်။ Switzerland ၌ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခဲ့သောအရာသည် ဒီအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်းအထဲ၌ မွေ့လျော်လာကာ ဒီကစားလုံးများကို အထပ်ထပ်ရွတ်ဆိုလာသည်၊ ကျွန်တော်တို့သည် နောက်ဆုံးသော မျိုးဆက်ကို ပြုစုပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
အခုလိုနောက်ဆုံးကာလ၌ ကျွန်တော်တို့သည် အသင်းတော်ရှိ မိသားစု၏ သဘာဝ နှင့် ၀ိညာဉ်ရေး၌ ပေးဆပ်တတ်သော မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်လာ စေရန်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်သည်။
ဒီဗီဒီယိုထဲတွင် Asher သည် သစ္စာရှိခြင်းကို စမ်းသပ်ခြင်းအကြောင်းသွန်သင်ထားသည်။ ကြုံသမျှသော အရာသည် ကျွန်တော်တို့ဘုရား၌ သစ္စာရှိကြောင်း နှင့် အနာဂတ် ကောင်းကျီးအတွက် အသက်တာကိုပြင် ဆင်ရန် အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လို နားထောင်ရန် ဒီ နေရာတွင် နှိပ်ပါ!
ညီလာခံ ရဲ့ ဖြည့်စွက်ချက်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၊ Tikkun America Network သည် ၃၃ ကြိမ်မြောက် နှစ်စဉ် ညီလာခံ ကို ဦးဆောင်ကျင်းပ နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒီညီလာခံသည် ခေါင်းဆောင်များအား မျှဝေ ပေးခြင်း၊ မိတ်သာဟာယကို အားဖြည့်ပေးခြင်း၊ နှင့် ပရောဖက်ပြုခြင်းဆိုင်ရာတို့ပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် Tikkun အဖွဲ့အစည်းသည် အမူတော်ငါးပါးကို အထူးပြုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂၅ မကသော ခေါင်းဆောင်များ၊ အသင်းတော်လူကြီးများ နှင့် သာသနာပြုဆရာများသည် ကိုးကွယ်ခြင်း၊ သင်ကြားခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခန်းများတွင် ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံကြသည်။ တရားဟောဆရာများသည် Asher Intrater၊ Dan Juster ၊ နှင့် ပါစတာ Che Ahn၊ Rabbi Jason Sobel တို့ဖြစ်ကြသည်။ Asher မှ အဖွင့် အားပေးစကား အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ၏ အသင်းတော်များကို မေတ္တာပြ အစေခံပြီး နိုင်ငံတကာအတွက် ကောင်းကျီးဖြစ်နိုင်ဖို့ရန် မေရှိယအဖွဲ့အစည်းအား ပြောကြားခဲ့သည် (အမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂း ၂-၃)။ နှိမ့်ချခြင်းသည် စည်းလုံးခြင်းအတွက် လမ်းစဖြစ်သည်။
ညီလာခံ၌ ၄၀၀ မက သော သူများနှင့် Tikkun ၏ မိတ်ဆွေများ စုရုံကြသည်။ ပါဝင်သူများသည် အံ့သြဖွယ် Paul Willbur နှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်ကြသည်။
“၀ိညာဉ်တော်နှင့်တစ်လုံးတစ်ဝ ဖြစ်ခြင်း” ခေါင်းစဉ် နှင့်လျော်ညီစွာ Che Ahn မှအဖွင့် အမှာစကားကို ကောင်းကျီးနှင့် အသီးသီးခြင်း အတွက် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ Dan Juster မှ Shabbat မနက်ခင်း အစ္စရေးနှင့် နိုင်ငံ တကာ တို့ပူပေါင်းခြင်းအတွက် ပရောဖက်ဆိုင်ရာ အနာဂတ်ပန်းတိုင် နှင့်၊ အစ္စရေး နှင့်သက်ဆိုင်သော အသင်းတော်၏ သက်သေကို ဝေငှခဲ့ပါသည်။ စနေနေ့တွင် Asher သည် သာမန်တော်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်းခြင်းကို ဝေငှခဲ့သည်။ Jason Sobel မှ ညီလာခံကို လာမည့် တပည့်တော်သစ်များအား ရိတ်သိမ်းခြင်း အကြောင်းအားဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
တပည့်တော်များသည် အမှန်တစ်ကယ် ပါလာစတိုင်းများဟုတ်ပါသလား?
Ron Cantor မှ ‘ပါလာစတိုင်း’ နှင့် စပ်ဆိုင်သော ကျမ်းပုဒ်များကို ဟောပြောခြင်းအား နားထောင်ရန် ဒီ နေရာတွင် နှိပ်ပါ!
ဇွန်လ ၁၃၊ ၂၀၁၅ တွင် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ထဲမှ (Youval, Tal, Jeremiah နှင့် Roni) တို့သည် ယေရုရှာလင်မှ Arab နိုင်ငံသား တစ်ယောက် အပါအ၀င် Switzerland ရှိ Geneva သို့သွားရောက်ကာ ညလုံးပေါက် ကိုးကွယ် ခြင်းတွင်ပါဝင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ကိုးကွယ်ခြင်းကို Hebrew နှင့် Arabic ဘာသာဖြင့်ဦးဆောင်ကာ အရှေ့အလယ် ပိုင်းအတွက်ဆုတောင်းကြဖို့ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.fetedesnations.ch တွင်ကြည့်ရူပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ အစ္စရေး၏ လက်ရှိ သာသနာများ ဖြစ်သော ကနဦးဧ၀ံဂေလိ လုပ်ငန်း ၊ မေရှိယ အဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၊ တပည့်တော်ဖြစ် သင်တန်း ၊ ဂျူးတိုင်းပြည်ရှိ ပရောဖက်ပြုခြင်း ဆိုင်ရာ ချီးမွမ်း ဆုတောင်းခြင်း ကင်းမျှော်စင် နှင့် အကူညီ လိုအပ်သူများအတွက် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုအတွက် ဆုတောင်းပေးပါ